Amụma Nzuzo | Law & More B.V.
Law & More hazie data onwe. Iji gwa gị n'ụzọ doro anya banyere nhazi nke data nkeonwe, a na-edepụta nkwupụta nzuzo a. Law & More na-akwanyere data nke gị ùgwù ma hụ na a na-eji ozi nzuzo nke enyere anyị aka na nzuzo. Nkwupụta nzuzo a na-arụ ọrụ dị mkpa nke ịkọwa ihe ndị metụtara data banyere ndị Law & More hazie data onwe. Ọrụ a sitere na Iwu General Nchedo Regulation (GDPR). Na nkwupụta nzuzo a, ajụjụ ndị kacha mkpa gbasara nhazi nke data sitere na Law & More ga-aza.
Law & More bụ onye njikwa banyere nhazi nke data nke gị. Law & More dị na De Zaale 11 (5612 AJ) Eindhoven. Ọ bụrụ na ajụọ ajụjụ gbasara nkwupụta nzuzo a, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị. Can nwere ike ịbịakwute anyị site na ekwentị na nọmba +31 (0) 40 369 06 80 na site na email na [email protected]
Ihe omuma nke onwe bu ihe omuma nile nke na-agwa anyi ihe banyere mmadu ma obu nke apuru isoro mmadu. Ozi nke na-agwa anyị ihe na-ezighi ezi gbasara mmadụ, ana-ahụkwa ka ọ bụrụ data nkeonwe. Nkwupụta nzuzo a, data nkeonwe pụtara ozi niile nke ahụ Law & More usoro sitere na gị na nke enwere ike ịmata gị.
Law & More hazie data nkeonwe iji nye ndi oru aka ma obu ozi nke aka ha nke ndi onwe ha n’enyere data n’echiche ha. Nke a gụnyere nkọwa kọntaktị na nkọwa onwe onye ndị ọzọ dị mkpa maka njikwa okwu gị, data onwe gị nke ị dejuru na mpempe kọntaktị ma ọ bụ mpempe akwụkwọ weebụ, ozi ị nyere n'oge ajụjụ ọnụ (mmeghe), data nkeonwe dị na weebụsaịtị nke ọha ma ọ bụ data nke gị. enwere ike ịnweta site na ndekọ ndị ọha na eze, dị ka Cadastral Registry na Trade Register nke berlọ Azụmaahịa. Law & More na-ahazi data nkeonwe iji nye ọrụ, iji melite ọrụ ndị a yana inwe ike ịkparịta ụka n'onwe gị dịka isiokwu data.
Nke data haziri nke ha Law & More?
Nkwupụta nzuzo a na-emetụta mmadụ niile data sitere na ha Law & More. Law & More na-eme data nke ndị anyị na anyị na-ezughị ma ọ bụ na anyị nwere, chọrọ isoro ma ọ bụ nwee mmekọrịta. Ndị a gụnyere ndị a:
(nwere) ahịa nke Law & More;
ndị na-achọ akwụkwọ;
ndị nwere mmasị na ọrụ nke Law & More;
ndị mmadụ na-ejikọ aka na ụlọ ọrụ ma ọ bụ nzukọ nke Law & More nwere, chọrọ inwe ma ọ bụ nwee mmekọrịta;
ndị ọbịa nke weebụsaịtị Law & More;
onye ọ bụla ọzọ na-akpọtụrụ Law & More.
Ebumnuche nke nhazi nke data onwe
Law & More hazie data onwe gị maka ebumnuche ndị a:
Inye oru iwu
Ọ bụrụ na i goro anyị ọrụ iji nye ọrụ iwu, anyị na-arịọ gị ka anyị kenye anyị ozi ịkpọtụrụ gị. Ọ nwekwara ike ịdị mkpa ịnweta data nkeonwe ndị ọzọ iji wee lebara okwu gị anya, dabere n'ụdị okwu ahụ. Na mgbakwunye, a ga-eji data nke gị iji nweta akwụkwọ ọnụahịa maka ọrụ enyere. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa maka ịnye ọrụ anyị, anyị na-enye ndị ọzọ data gị onwe gị.
Law & More na-edepụta data nke gị na sistemụ ma chekwaa data ndị a iji nye gị ozi. Nke a nwere ike ịbụ ozi gbasara mmekọrịta gị na Law & More. Ọ bụrụ na gị na ya enweghị mmekọrịta Law & More (ma), are na-enwe ike ịrịọ ozi site na iji ụdị kọntaktị na weebụsaịtị. Law & More na-eme data nkeonwe iji kpọtụrụ gị ma nye gị ozi achọrọ.
Law & More na-ahazi data nke onwe gị iji mezuo iwu. Dịka iwu na ụkpụrụ omume metụtara ndị ọka iwu, iwu ji anyị ịchọpụta njirimara gị dabere na akwụkwọ njirimara dị mma.
Nnyocha na nhọrọ
Law & More na-anakọta data nke gị maka ebumnuche mbanye na nhọrọ. Mgbe ị zigara akwụkwọ ọrụ maka ọrụ Law & More, echekwara data onwe gị iji chọpụta ma a ga-akpọ gị maka ajụjụ ọnụ gbasara ọrụ na iji kpọtụrụ gị gbasara ngwa gị.
Law & More na-eji ọtụtụ netwọkụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, ya bụ Facebook, Instagram, Twitter na LinkedIn. Ọ bụrụ n’iji ọrụ ndị dị na weebụsaịtị gbasara mgbasa ozi ndị na-elekọta mmadụ, anyị na-enwe ike ịnakọta data onwe gị site na netwọkụ na-elekọta mmadụ metụtara.
Mkpokọta azụmaahịa were webụsaịtị
Iji tụọ azụmahịa nke webụsaịtị ya, Law & More na-eji ọrụ Leadinfo na Rotterdam. Ọrụ a na-egosi aha ụlọ ọrụ na adreesị ụlọ ọrụ dabere na adreesị IP nke ndị ọbịa. Agụnyere adreesị IP ahụ.
Ohere maka nhazi nke data nkeonwe
Law & More hazie data nkeonwe gị na ntọala nke otu ma ọ bụ karịa:
Law & More nwere ike hazie data nke gị maka na i nyela nkwenye maka nhazi a. I nwere ikike iwepu nkwenye a oge niile.
Dabere na nkwekọrịta (a ka ga-ekwubi)
Ọ bụrụ n’ị goro ọrụ Law & More iji nye ọrụ ọrụ iwu, anyị ga-ahazi data nke gị ma ọ bụrụ na ruo ogologo oge dị mkpa maka ịrụ ọrụ ndị a.
A ga-ahazi data nkeonwe gị iji rube isi n'iwu iwu. Dika iwu nchịkwa ego ego nke Dutch Anti na iwu nkwado nke ndị na-eyi ọha egwu, iwu ji ndị ọka iwu ịnakọta ma dekọ ụfọdụ ozi. Nke a gụnyere, n'etiti ndị ọzọ, ọ dị mkpa ịchọpụta njirimara ndị ahịa.
Iwu ziri ezi
Law & More na-ahazi data nkeonwe gị mgbe anyị nwere mmasị ziri ezi ịme ya yana mgbe nhazi ya anaghị emebi ikike gị ịnọ na nzuzo na ụzọ ekwesighi.
Sharingkekọrịta data nkeonwe n'etiti ndị ọzọ
Law & More na-ekpughe data nkeonwe gị naanị ndị ọzọ mgbe nke a dị mkpa maka ịnye ọrụ anyị, na-asọpụrụ ihe mgbakwasị ụkwụ mbụ ekwuru. Nke a nwere ike ịgụnye mmechi nke nkwekọrịta, ịkọwa data nkeonwe gbasara usoro (iwu), mmekorita ya na onyeisiala ma ọ bụ mee ka ndị ọzọ na nnọchite na inye ọrụ Law & More, dị ka ndị na-eweta ọrụ ICT. Na mgbakwunye, Law & More nwere ike ịnye ndị ọzọ ozi nkeonwe, dị ka onye nlekọta ma ọ bụ ikike a họpụtara n'ihu ọha, n'ihi na iwu kwadoro ịme nke ahụ.
Ndi ozo nke gha eme ntinye data nke aka gi gha emechu ha ma gha eme ya Law & More. Dịka nsonaazụ, a na-enye iwu nrụpụta ọ bụla ịgbaso GDPR. Ndị ọzọ na-eme ka Law & More, mana ịnye ọrụ dịka onye njikwa, bụ onwe ha maka ịsọpụrụ GDPR. Nke a gụnyere dịka ọmụmaatụ ndị na-eme ego na notaries.
Nche nke data nkeonwe
Law & More na-eche nche na nchedo nke onwe gị data n'ọtụtụ ma na-enye usoro teknụzụ na nhazi kwesịrị ekwesị iji hụ na ọkwa nke kwesịrị ekwesị dị n'ihe ize ndụ ahụ, na-eburu steeti nka. Mgbe ole Law & More na-eji ọrụ ndị ọzọ, Law & More ga edekọ nkwekọrịta banyere ihe aga-ewere na nkwekọrịta processor.
Law & More ga-echekwa data nkeonwe nke a na-ahazi ọzọ karịa ka ọ dị mkpa iji wee bie ebumnuche ahụ ebuputere data ahụ, ma ọ bụ karịa ka iwu ma ọ bụ ụkpụrụ chọrọ.
Ikike nzuzo nke isiokwu data
Dabere na iwu nzuzo, ị nwere ikike ụfọdụ mgbe ị na-ahazi data nke gị:
I nwere ikike inweta ozi gbasara gị onwe gị na-ahazi ya yana nwee ike ịnweta data nkeonwe ndị a.
I nwere ikike ịrịọ onye njikwa ya idozi ma ọ bụ mezue data nkeonwe.
'Ikike ikpochapu (' ikike ichefu echefu ')
I nwere ikike ịrịọ maka ya Law & More ihichapu data nke onwe a na-eme. Law & More ga-ehichapụ data onwe ndị a n'ọnọdụ ndị a:
ọ bụrụ na data nkeonwe adịkwaghị mkpa gbasara ebumnuche nke anakọtara ha;
ọ bụrụ na ịwepu nkwenye nke nhazi a dabere na enweghị usoro iwu ọ bụla ọzọ maka nhazi;
ọ bụrụ na ịgọnarị nhazi ahụ ma ọnweghị iwu akwadoro maka nhazi ahụ;
ọ bụrụ na ahaziri data nkeonwe;
ọ bụrụ na ehichapụ data nke onwe ya maka imebere iwu.
Ikike mmachi nhazi
I nwere ikike ịrịọ maka ya Law & More igbochi nhazi nke data onwe gị mgbe ị kwenyere na ọ dịghị mkpa na ahaziri ụfọdụ ozi.
I nwere ikike inweta data nkeonwe nke ahụ Law & More usoro na ịnyefe data ndị ahụ na njikwa ọzọ.
Nwere ikike, n'oge ọ bụla, ịjụ nhazi nke data onwe gị site na Law & More.
Younwere ike itinye arịrịọ maka nnweta, ndozi ma ọ bụ mmecha, nhichapụ, mgbochi, ikike data ma ọ bụ iwepu nkwenye enyere na Law & More site n'iziga email na adreesị ozi-e: [email protected]. You ga-enweta azịza arịrịọ gị n’ime izu anọ. Enwere ike inwe ọnọdụ ebe Law & More enweghị ike (mezue) mejuputa arịrịọ gị. Dịka ọmụmaatụ nke a nwere ike bụrụ ikpe mgbe etinyeghị izu nzuzo nke ndị ọka iwu ma ọ bụ oge njigide iwu.